Ten Thousand Things (TTT) waxay ku dhalinaysaa sheekooyinka qadiimka ah, sheekooyinka caadiga ah, iyo casriga casriga ah iyada oo loo marayo isdhexgalka muhiimka ah ee furan ee ka dhexeeya jilayaasha iyo dhagaystayaasha aan caadiga ahayn. Shirkadda Farshaxanka leh, TTT waxay soo saartaa ciyaaraha firfircoon ee caanka ah ee kuyaala Minnesota, oo ay ku jiraan xarumaha beelaha, hoyga iyo xarumaha saxda ah. Iyada oo ay ku jiraan waxyaabo yaryar, isku dhafid badan iyo aan lahayn iftiinka ama saameynta masraxa, TTT waxay ku tiirsan tahay jilayaal si gaar ah loo sheego sheeko isla markaana abuuro khibrad.
Sahanku waxay ku tiirsan yihiin fursadda ay ugu shaqeyn lahaayeen goobaha caynkaas oo kale ah. Markaa, TTT waxay ilaalisaa farshaxankeeda maskaxda ku haysa. Iyadoo aan lahayn dhismo ama kaabayaal shaqaale ah si ay u sii wadaan, TTT waxay mudnaanta siinaysaa taageerada farshaxanada. Mushaharka ayaa tartan la leh tiyaatarka gobolka ugu weyn, guuleysta TTT ayaa si wayn ugu faanaya. Ballan-qaadka ku aaddan farshaxan-yahannadu waxay u tahay mid ku habboon macaashka McKnight ee taageeraya ururada farshaxan ee yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah.
Shaqadu waxay u weecataa dadka dhagaystayaasha ah, qaar badan oo ka mid ah ma aysan arkin bandhigyada kale ee masraxa. Bannaanbaa waa sheekooyinka guud ee soo jiidanaya aragtida fasalka, jinsiyadda, waxbarashada, iyo khibrada nolosha. Ka dib markii uu arko TTT's My Lady Fair, xubin ka mid ah dhagaystayaasha ayaa qoray, "Anigu ma sheegi karo inta qoyskeyga iyo waxaan jecelahay My Lady Lady. Dhammaanteen waxaan ku heshiinney in ay ahayd tii ugu fiicnayd, ee dhabta ah, midkasto, waxqabadka wanaagsan ee musikada aan waligay aragney. Waxaan u sheegay qof walba oo aan la kulmay tan iyo markii aan arko in ay tahay inay arkaan muuqaalkan. "Kadib markaan arkay Man of La Mancha, mid kale ayaa yiri," Midkeena ma yaqaanno muusigga asalka ah, laakiin waa la yaabay - markasta TTT show- sida ugu habboon ee looxa yar yahay, oo leh santuuqyo xadidan iyo qoryo xaddidan, waxay qabsan karaan sharafka, riwaayadda, iyo muusikada si gebi ahaan loogu wado dhagaystayaasha. "